EndeavorOS inononoka kuburitsa vhezheni yayo ne net-installer | Linux Vakapindwa muropa
Zvinotaridza kuti kukura kwe EdzaOS iri kusangana nekuderera. mushure meimwe Gumiguru Yakasvika munguva yaitarisirwa, pakanga pasina vhezheni yaNovember nekuti bhagi yaifanira kugadziriswa mune yakatangwa mwedzi wapfuura. Kwapera mwedzi miviri, Zvita uyu, vaitofanira tangisa mufananidzo mutsva iyo yainyatso kuve Gumiguru, asi neiyo bug yakagadziriswa. Nhasi vatipa zvakaipa nhau zvakare muchimiro chekumwe kunonoka.
Sezvatinoverenga mu yakatumirwa kupinda pane yayo portal yenhau, timu iri kuvandudza EndeavorOS yakanga yaronga kuvhura ino vhiki ino net-inosimudza, chimwe chinhu chinofanirwa kushamisika paKisimusi. Kushamisika hakuna kuuya, kana zvirinani kwete yakanaka, nekuti maitiro avakamira, Arch Linux, iri kugadzirira hombe yekuchenesa patsva paXorg naFred Bezies, iyo, pakupedzisira, yakadudzira kuti vanofanirwa kunonoka kuburitswa uku.
EndeavorOS net-installer ichafanirwa kumirira
Izvozvi Archlinux iri kugadzirira hombe yekuchenesa yekuvandudza kubva kuna Xorg naFred Bezies avo vakamhanyisa mimwe bvunzo neiyo network inosimudza ine test repository inogoneswa. Zvinogona kusashamisa iwe kuti iyo net-inosimudza haina kushanda nemazvo pasi peavo mamiriro ezvinhu.
Zvinotaridza senge, yekuvandudza icharova main repository munguva pfupi iri kutevera uye matambudziko achagadziriswa. Zvakadaro, timu yekuvandudza yeEndeavorOS inokumbira ruregerero nekutitadza isu kechipiri mumwedzi miviri, asi inovimbisa kuti iyo-yekumisikidza ichawanikwa munguva pfupi. Zvakare, isu tinonzwisisa kuti panguva ino ivo havana basa nekunonoka uku.
EndeavorOS kukura kwakaratidzika kunge kuri kufamba mushe kudzamara izvi zviviri zvekupedzisira zvikundikana. Asi izvo, zvaishamisa kuti zvese zvakafamba mushe, tichifunga kuti zvinhu zvakawanda zvachinja, kusanganisira timu yevagadziri, zvekuti vakasarudza kutumidza zita iro yaimbozivikanwa seAntergos.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » EndeavorOS inononoka kuburitsa vhezheni yayo ne net-installer
Mumwe munhu anogona kunditsanangurira zvakanakirei kugoverwa uku kwaenzaniswa neManjaro?